ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်ရှက်တတ်ဖြစ်ကြသည်ဆိုရင်အမျိုးသမီးရေးရာဘယ်လိုချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မည်?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 21 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
အထက်ပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်သင်၏အခြေအနေကိုဖော်ပြရန်ပါသလား? သင်သည်အလွယ်တကူ-To-execute ကိုရှာဖွေနေပါသည်, ဒါပေမယ့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရ? ဟုတ်တယ်ဆိုရင်, အောက်တွင်ဆွေးနွေးမှုသင်ကူညီသင့်တယ်.
ရှက်ကြောက်စိတ်ကိုကျော်လွှားရန်, ထိုယုံကြည်ခြင်းသည်အောင်မြင်ရန်သင့်ကိုကူညီနိုင်သင်ကိုယ်တိုင်၌ယုံကြည်ခြင်းတော်တော်များများနှင့်အချက်တစ်ခု culmination ရှိသည်ရလိမ့်မယ်. သင်ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာအတိအကျသိပေါ်တွင် Read.
တဦးတည်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏အသွင်အပြင်ကိုမပြောင်းနိုင်ကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ဒါဟာင်. ရလဒ်အနေနှင့်, တစ်ဦးသောသူသည်ကြည့်ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး, သို့သော်သူသည်ဧကန်အမှန်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချကြည့်ရှုရန်အချို့သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်.
မကြောင့်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ရှက်ကြောက်စိတ်မဆိုထိုမိန်းမသည်ချဉ်းကပ်ရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းနာ​​းလည်နိုင်ဒါဟာင်, သင်မူကား, စကိုနားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်တအမှုသည်သင်တို့ထက်အခြားမည်သူမျှခြင်းဖြစ်သည် (သင်ရန်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်ကလူ) သင်သည်ရှက်ဖြစ်ကြောင်းသိတယ်.
ဒါကြောင့်, သင်အလွယ်တကူသူတို့ကိုသင်ခွှသူများ၏တဦးဖြစ်ကြောင်းနာ​​းလည်သဘောပေါက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မပါဘဲလူများတို့နှင့်အတူရောနှောဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ (ရှက်တတ်ဖတ်) အမြဲသွားမိန်းကလေးငယ်များကိုငြိမ်းကြသူယောက်ျား. ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူသင်သည်သင်၏ပါရှိသောပုန်းဖို့အဘို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်; သင်အောင်မြင်စွာဒီအဖုံး-up ကိုဖျော်ဖြေဖို့စီမံခန့်ခွဲတစ်ချိန်က, သင်အလိုအလျှောက်ပိုယုံကြည်စိတ်ချခံစားနေရတယ်စတင်ပါလိမ့်မည်.
သင်ဝတ်စားဆင်ယင်လမ်းခုလတ်မှာ bit နဲ့အာရုံစူးစိုက်ရမယ်စိတ်ချယုံကြည်ကြည့်ရှုရန်. သင်လူအစုအဝေးထဲကရပ်တည်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်အပြင်သို့ရှောင်ကြဉ်ပါ. မလုပ်ပါနှင့်, သင်လူအစုအဝေး၌ထင်ရှားစေခြင်းငှါသူတို့အချောင်းဘောင်းဘီနှင့်ရှပ်အင်္ကျီအရောင်တောက်တောက်ဝတ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ပဲနည်းနည်းနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ; သင်အပေါ်အကောင်းကြည့်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျှင်, သင်အလိုအလျှောက်သင်တို့ပတ်လည်အမျိုးသမီးများစိတ်အာရုံကိုဖမ်းစားပါလိမ့်မယ်.
သင့်ပတ်လည်၌လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမိန်းကလေး woo ဖို့စီစဉ်နေကြတယ်? တစ်ရှက်တတ်သူအဖြစ်, သင်ထိုသို့ကြိုးစားနေကိုရှောင်ရှားသင့်.
ရှိပြီးသားလူကြိုက်များသည်နှင့်သူမ၏အုပ်စုထဲမှာအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုတဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများသူသည်မည်သည့်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်အားကိုယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်အလွန်မကြာသေးမီကစုဝေးစေယုံကြည်မှုထိုကဲ့သို့သောမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုချဉ်းကပ်ဖို့လုံလောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ; သူမ၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုလည်းသင်ဆိုင်သင်သည်သူမ၏ချဉ်းကပ်မယ့်အခိုက်အတချိုးမည်.
ဒါကြောင့်, သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သင့်ရဲ့အဆင့်အကိုက်ညီဆုံးမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်; သင်ခြိမ်းခြောက်သောမိန်းမတို့ကိုချဉ်းကပ်အမြဲရှောင်ရှားနိုင်ရန်.
သင်နောက်ဆုံးတော့သူတစ်ဦးဦးကိုချဉ်းကပ်လာသောအခါ, မျက်လုံးချင်းအောင်ရှောင်ရှားကြဘူး. ယောက်ျားသည်မည်သည့်တားစီးမပါဘဲသူတို့မျက်စိကိုသို့ကြည့်သောအခါအမျိုးသမီးများသည်ကိုအလွယ်တကူ wooed ရ.
ဤသည်, သို့သော်, ဖြစ်နိုင်အခက်ခဲဆုံးအလုပ်ကရှက်သောသူကိုအစဉ်အဆက်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုခံရနိုင်ပါတယ်; ဒါပေမဲ့, ပထမဦးဆုံးအတား i.e တစ်ချိန်က. ထိုမိန်းမသည်ချဉ်းကပ်သင်နောက်တစ်နေ့ကိုကူးဖြတ်ဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုတင်ရလိမ့်မယ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်.
မျက်လုံးချင်း Making သင်အမှန်တကယ်ယူဆနေကြတယ်ဆိုတာကိုထက်မျ​​ားစွာ ပို. လွယ်ကူသည်. မျက်လုံးချင်းအောင်ပြီးနောက်, မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစား; သင့်ရဲ့ကနဦးစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ဧကန်အမှန်ကွယ်ပျောက်ကြလိမ့်မည်.
အထက်ပါအကြံပြုချက်များကိုရှက်ကြောက်စိတ်၏ shell ကိုမှထွက်မလာသင့်ကိုကူညီသင့်တယ်. အဲဒီအကြံပြုချက်ကိုအောက်ပါထက်အခြား, သင်သင့်သည်စကားပြောဆိုမှုကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်ဟာသသင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုက်နိန်အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်.